Fitoeran-tsoavaly | Soavaly Noti
Ireo sakana Io no toerana ipetrahan'ny biby fiompintsika, ka tsy maintsy ampifanarahintsika tsara aminy izy ireo, satria avy eo mora ny olana, misy olana ny hoditra na koa amin'ny faritra hafa. Tokony handinika antsipiriany marobe isika rehefa manangona sy mitazona ny tranon'omby, indrindra amin'ny sehatry ny fahadiovana.
Ao amin'ity habakabaka ity no hahitanao, torohevitra, vokatra ary hevitra ka manana ny soavalintsika sakana vitsivitsy amin'ny fombanao sy ny zavatra ilainao. Tsarovy fa ny fampahalalana dia hery ary izay manisa bebe kokoa azontsika angonina bebe kokoa, ho antsika sy ho an'ny biby. Aza adino fa ho azy ireo ny tranon'omby dia toy ny efitranontsika ho antsika ary ny tsara kokoa dia ampifanarahana amin'ny biby, betsaka kokoa ny vokatra azo raha oharina amin'ny adidiny, na fanatanjahan-tena na tsia.
Ny tovolahy miorina: andraikitra sy andraikitra
Ny tovolahy matanjaka dia iray izay miandraikitra ny fikarakarana sy ny fiadanan'ireo mpitsikilo. Ny asanao dia ny mifehy ny ...
Ilay soavaly dia mety ho iray amin'ireo mpikambana ao amin'ny fanjakan'ny biby izay mamindra ny hatsarana sy ny kanto indrindra. Ny fiakarany be dia be ...
Fikojakojana ny boaty na stable
Ny fikojakojana ny soavaly ary koa ny fahadiovany dia manan-danja toy ny tranony misy azy, izany hoe ...
ny rose sanchez hace 8 taona .
Ny fanakanana dia ny fanidiana ny soavaly amin'ity tranga ity ao amin'ny: ny tranon'omby, ny tranon'omby na ny boaty, ary io no toerana ...
Ny maha-zava-dehibe ny fahazarana amin'ny soavaly
Ny fahazarana amin'ny fiainan'ny soavaly dia manandanja indrindra, amin'ny fiheverana fa misy fiovana tampoka ...
Ny fihetsika voajanaharin'ireo soavaly
Ny soavaly dia samy hafa be ny fihetsika arakaraka ny toetran'ny tsirairay, fa ny azontsika antoka dia ...
Fiorenana ao amin'ny tranon'omby
Rehefa lava ny soavaly ao amin'ny tranon'omby dia manomboka manana fomba fitondran-tena ratsy izy, ohatra manomboka ...
Inona no dikan'ny fihetsiky ny sofin'ny soavaly?
Isika rehetra izay mandany ny androm-piainantsika dia afaka mandinika ny fihetsiky ny sofina, izay tsy manana na inona na inona ...
Ahoana ny fomba fananganana tranon'omby
Ilaina ny tranon-tsoavaly ho antsika rehetra izay miaina amin'ny tontolon'ny maoderina, ka lainga ny filazana ...
Ahoana no hisorohana ny soavaly mitaingina
ny danigraffi hace 11 taona .
Amin'ny tranga maro dia hitantsika fa solafaka matetika ireo soavaly, na amin'ny fitoeran-tsoavaly na rehefa mitondra ny mitaingina azy, ...
Ahoana ny fanamboarana ny soavaly (Fizarana Voalohany)
Ny fanontana dia mifototra amin'ny fahazoana ny soavalintsika hanana fahombiazana mandroso amin'ny fanentanana isan-karazany izay ...